China Little Bear Inotenderera Laser Toy Kugadzira uye Fekitori | Kusetsa
Iine chitarisiko chakanakisa kunge bheya remarara, uye inoburitsa laser mwenje kubva pakavha nhema yemusoro wayo, sekunge bheya rinogona kuburitsa laser mwenje kubva mumaziso ayo, ayo akanaka kwazvo. Muridzi wekati anogona kuratidzira laser kumadziro kana pasi, uye anogona kugadzirisa kona pamadiro, achichinja imba kuita inonakidza katsi yekutamba.
MaModhi matatu: Hapana maitiro ekutenderera maitiro - anoenderana nekatsi yekudzinganisa tsika; Otomatiki inokurumidza uye inononoka modhi - inononoka giya inosimudzira yakakodzera kurovedza muviri, inokurumidza giya inosimbisa kurovedza muviri ； Yakagadziriswa-poindi ruoko rwakachengetedzwa modhi - wedzera kusangana nekitsi
Basa reNguva: Kuchenjera kwekutamba nekatsi, shanda kwemaminetsi gumi neshanu mushure mega maawa e1,5, uchibvumira katsi kurovedza muviri kana kutamba nguva nenguva.
Angle Kugadziridza: mashanu akasiyana mafurakisi maakona gadzirisa mashanu akasiyana masize eanofamba trajectories, ayo anogona otomatiki akasarudzwa zvinoenderana nesaizi yenzvimbo.
• Hapana Ruzha: Inotsika-nhanho-inoshandura yakanyarara mota, inogutsa chinyararire dhizaini uchisekesa kati, haimutse kati
Dual Power Supply: USB yakananga plug plug magetsi ekushandisa mukati, AA bhatiri simba rekushandisa kunze kwekushandisa
Industrial giredhi laser mwenje (inogona kushandiswa kwenguva yakareba)
Pashure: 2 mu1 Imbwa Nail Grinder & Bvudzi Rinogadzira
Zvadaro: Transparent Trolley Kesi YeDiki Pet
Π Nhepfenyuro yeKati Teaser Inonamira Toy
Π Yakateedzana Waini Bhodhoro Cat Toy